Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » abantu » Olona Mphathiswa wezoKhenketho kwezeNtlalo uvela eIndonesia
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • inkcubeko • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zaseIndonesia eziQhekezayo • Utyalo mali • iindaba • abantu • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo • yokuzonwabisa
derawan isiqithi indonesia ftsq
Ohloniphekileyo uSandiago Saiahudin Uno, uMphathiswa wezoKhenketho kunye noQoqosho loQoqsho kwiRiphabhlikhi yase-Indonesia ujoyine iQela leNethiwekhi yoKhenketho yeHlabathi ngolwe-Sihlanu ukuze athethe ngezimvo zakhe kukhenketho lwe-Indonesia, umbono kunye namanyathelo. NgoLwesihlanu ibingunyaka omnye wesikhumbuzo seengxoxo zohambo esakha saqalwa yi-WTN nge-Matshi 5, 2020
Ngabalandeli abasondele kwizigidi ezisi-8 kwi-Instagram yakhe, oHloniphekileyo uSandiago Saiahudin Uno, Umphathiswa Wezokhenketho kunye noQoqosho loBunjani kwiRiphabhlikhi yaseIndonesia, kufuneka abe ngoyena nkokheli kurhulumente wezentlalo.
"Ndifuna ukuya kwii-webinars ezininzi kangangoko kunokwenzeka," Umphathiswa Wezokhenketho wase-Indonesia uxelele amalungu eNethiwekhi yoKhenketho yeHlabathi.
I-Indonesia ithathela ingqalelo abasebenzi kushishino lokhenketho nokhenketho njengokubabeke phambili ekufumaneni ukufikelela kwisitofu sokugonya se-COVID-19.
Ohloniphekileyo uSandiago Saiahudin Uno, uMphathiswa wezoKhenketho kunye noQoqosho loBuchule kwiRiphabhlikhi yase-Indonesia, wazibandakanya Inethiwekhi yoKhenketho yeHlabathi Iqela ngolwesiHlanu ukusuka emotweni yakhe eqhuba ngeManado entle.
IManado sisixeko esilikomkhulu lephondo laseIndonesia kuMantla eSulawesi. Yidolophu yesibini ngobukhulu eSulawesi emva kweMakassar. Njengesona sixeko sikhulu kumantla eSulawesi, iManado yindawo ebalulekileyo yabakhenkethi. I-ecotourism iyeyona nto inomtsalane eManado. Ukuntywila nge-Scuba kunye ne-snorkeling kwiSiqithi saseBunaken nazo ziyathandwa phakathi kwabakhenkethi. Ezinye iindawo ezinomdla liLake Tondano, iNtaba iLokon, iNtaba yeKlabat, kunye neNtaba iMahawu.
Ebona izibane ezibomvu ezidanyazayo kunye nokuva inhlabamkhosi yamapolisa yokuhambisa uMphathiswa ngasemva, u-Uno wathetha ngezimvo zakhe kukhenketho lweIndonesia, imbonakalo, kunye namanyathelo. NgoLwesihlanu ibisisikhumbuzo sonyaka omnye se Ukwakha kwakhona uKhenketho Ingxoxo iqalwe yi-WTN ngo-Matshi 5, 2020.
Umyalezo wakhe oya kumalungu eNethiwekhi yoKhenketho kwiHlabathi jikelele wathi: “Ndihlala ndizama ukuya kwii-webinars ezininzi kangangoko. Ndonwabile abalandeli abayi-7.7 yezigidi kwi-Instagram yam, kuYouTube nakwezinye izinto zokuncokola Ndithembele kumalungu eWorld Tourism Network ukuba ancedane kula maxesha anzima. ”
UMphathiswa uqhubeke wachaza ukuba izigidi ezingama-34 zokuphila kwabantu baseIndonesia zixhomekeke kukhenketho, ukhenketho, kunye nemveliso yoyilo.
Okwangoku, isiqingatha sesibini sebheji yezitofu zokugonya ezizizigidi ezingama-34 zikwi-Indonesia zikulungele ukuya kwiingalo zeqela eliphambili kubandakanya abemi abangaphezulu kweminyaka engama-60 ubudala, amapolisa, abasebenzi bakarhulumente, kunye nabemi abasebenza kushishino lokhenketho.
Ilizwe lijolise ekuthonyeni abantu abazizigidi ezili-181.5, kunye nabokuqala ukuba bagonywe befumana isitofu sokugonya iCoronaVac esivela eChina iSinovac Biotech, eyagunyaziswa yi-Indonesia ukuba isetyenziswe ngokungxamisekileyo. Le nkqubo kulindeleke ukuba ithathe iinyanga ezili-12.
Ngokuka-Mphathiswa, uphononongo lwamva nje luthi luyakuthatha iintsuku ezingama-28 emva kokufumana isitofu sokukhusela kwi-COVID-19.
Icandelo lokhenketho laseIndonesia njengakwamanye amazwe amaninzi ngoku lixhomekeke kukhenketho lwasekhaya. I-Indonesia ikwingxoxo nemimandla yaseAsia yokuvula iipaseji zokhenketho ze-COVID-19 ezikhuselekileyo.
UMphathiswa uvumelane nowayesakuba nguMphathiswa wezoKhenketho waseSeychelles, u-Alain St. Ange, ngokubaluleka kokunxibelelana nehlabathi ngento enokhenketho. USngenge uxelele uMphathiswa: “Ukuqubha ngejellyfish eIndonesia engalumiyo nokubona ihlengesi ezipinki yayingamava amahle.”
Intlanganiso yesikhumbuzo soKhenketho lweHlabathi yeHlabathi ibandakanya abaphathiswa bezokhenketho abavela eAsia naseAfrika; amagosa aphezulu ebhodi yezokhenketho e-Afrika, eMalaysia, eSeychelles naseJordani; kunye namalungu avela kumaQela eeNqwelo-moya noNcedo lwezeMfundo kwiNethiwekhi yoKhenketho yeHlabathi. Okwangoku, i-WTN inamalungu angama-1,500 eshishini lokhenketho kumazwe ali-127.
UMphathiswa Uno wayejonge phambili kule ntlanganiso ukuze abelane ngamava ne-WTN kunye namalungu ayo ekuqhubeni le meko inzima.
USngenge uthe uyothulela umnqwazi uMphathiswa ngokujoyina le ngxoxo kunye nokuvuleleka kwakhe ekunxibelelaneni nenethiwekhi. Umphathiswa waseIndonesia wathi ungusomashishini ngoqeqesho.
Ulwazi oluthe kratya kwiNethiwekhi yoKhenketho yeHlabathi: www.wtn.travel